China Training Bibs Ndị okenye na ụmụaka na-eku ume ngwa ngwa bọọlụ Pinnies Football Team Jerseys Vest for Sports Scrimmage Practice manufacturers and suppliers | RE-HUO
Ọzụzụ Bibs Ndị okenye na ụmụaka na-eku ume ngwa ngwa bọọlụ Pinnies Football Team Jerseys Vest for Sports Scrimmage Practice
Omenala imewe: Ọ bụ oghere - ka ị nwee ike ịhazi.
Zuru okè maka Egwuregwu Dị ka Nkata, Bọọlụ, Football, Volleyball na ndị ọzọ. Ọmarịcha maka mmemme Schoollọ Akwụkwọ na Otu Ọrụ.
Typedị :dị: Egwuregwu bọọlụ Pinnies
Ihe: 120gsm 100% polyester
Ọ bụrụ na nke a dị n'elu enweghị agba ịchọrọ, anyị nwekwara ọrụ ọrụ ahaziri, anyị nwere ike ịhazi akwa dịka ihe ị chọrọ, naanị ị ga-enye Pantone agba nke akwa ma ọ bụ zipu otu akwa na ụlọ ọrụ anyị.
Nke a bụ nha eserese anyị na-echekwa, Anyị na-enye ọrụ nha ahaziri iche.
Nke gara aga: Jmụaka Jerseys Scrimmage Ọzụzụ Vest Football Vest Mesh Breathable Bibs maka Volleyball Soccer Basketball
Osote: Elu kacha mma N'ogbe egwuregwu sublimation otu omenala football edo edo bọọlụ setịpụrụ bọọlụ